Android Pie na -amalite ịbịarute na Moto G6 Plus | Androidsis
Moto G6 Plus na-amalite imelite gam akporo Pie
Eder Ferreño | | Motorola, Gam akporo nsụgharị
Moto G6 Plus bụ otu n’ime ọkọlọtọ etiti ala Motorola. Ewebata Mmiri 2018, ekwentị aghọwo otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ika. Ugbu a, ọ ghọrọ nke mbụ nke nso ya iji nweta melite gam akporo Pie. Mmelite nke malitere ịmalite tupu njedebe nke afọ.
Ngwunye gam akporo OTA maka Moto G6 Plus malitere ịtọhapụ na December 31. India bu ahia mbu nke etinyere ya. Ọ bụghị ihe ndabara, n'ihi na ọ bụ isi ahịa maka ụlọ ọrụ ahụ, yana otu n'ime ihe kachasị mkpa maka ndị nrụpụta n'ozuzu.
N'ụzọ dị otú a, akụkọ niile nke gam akporo gam akporo na-abịakwute ụdị a dị n'etiti. Tinyere mmelite ahụ, Moto G6 Plus nweta december nche patch. Ya mere, ekwentị na-echebe n'ụzọ dị otú a megide ndị ọhụrụ kwere omume ọma. Mmelite zuru ezu.
N'oge a, ndị ọrụ nọ na India bụ ndị mbụ nwere ohere ịnweta gam akporo Pie OTA maka Moto G6 Plus. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya ya na ụbọchị ole na ole sochirinụ malite iru mba ndị ọzọ na Europe, na mgbakwunye na Brazil, ahịa ndị isi nke ụlọ ọrụ n'ụwa niile.
Obere nke nta anyị na-ahụ ka ọnụọgụ nke ụdị mmelite na-abawanye na Android Pie. N'ezie, agbam ume nke dị mkpa maka ụdị sistemụ arụmọrụ a. Anyị enwebeghị data na nkesa nke sistemụ arụmọrụ ogologo oge, mana na mkpuchi ọzọ na ọ na-emeworị ihu.
Ọ bụrụ na ị nwere Moto G6 Plus, Ọ gaghị ewe ogologo oge maka mmelite ahụ ịbata site na OTA na A gam akporo. Yabụ, ịnwere ike ịnụ ụtọ ọrụ niile nke ụdị sistemụ arụmọrụ a na-ahapụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto G6 Plus na-amalite imelite gam akporo Pie
Google Maps na-enye gị ohere izipu ozi na azụmaahịa
Atụmatụ iji gbanyụọ mgbe ịzụrụ ekwentị gam akporo